ဒိန်ခဲအာလူးသမ်းခြင်း (အပိုမြန်ပြင်ဆင်မှု) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
၂၁ ရက်ပြင်ဆင်ချက် ၁၂၀၀
Cheesy Potato Casserole သည်နံနက်စာ၊ မနက်လည်စာ၊ နေ့လည်စာ၊
သငျသညျအခွံနှင့်ခုန်ကျော်သွားနိုင်အောင်ဒီ casserole ဖျက်စီး hashbrowns နှင့်အတူအပိုမြန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်! ရွှေနှင့် bubbly တိုင်အောင်အတူတူကအားလုံးကိုဖုတ်ရမည်!
ဒီစာရွက်ကိုကြိုက်လို့ပါ ပြင်ဆင်ထားရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါသည် နှင့်မီးဖို၌ pop!
အသုံးပြုသည် ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများ မနက်စာမှသည်ညစာသို့တစ်နေ့တာအတွက်မည်သည့်အစာကိုမျှမစားနိုင်ပါ။
ဒါဟာငါအပိုစူပါ cheesy င် ဘယ်တော့မှကျန်ကြွင်းဘယ်တော့မှမ ငါတို့က potluck ယူဆောင်လာလျှင်!
ဒီ casserole ဖြစ်ပါတယ် စူပါစွယ်စုံ ချက်ပြုတ်ထားသောအသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုထည့်ပေါင်းခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် ကျန်တဲ့ သင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာနီးပါးဘာမှ၏!
ပါဝင်ပစ္စည်းများ & မူကွဲ
ဒိန်ခဲ Sharp Cheddar သည်ဒီပန်းကန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သောဒိန်ခဲအရသာကိုပေးသည်။ Monterey Jack၊ Mozzarella သို့မဟုတ် Havarti တို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
မီးဖို၌ leeks ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို
ငံပြာရည် သိပ်သည်းသော cheddar ဒိန်ခဲဟင်းချို ထည့်သွင်းထားသည်ဆိုပါကသင်သည်လက်ပေါ်ရှိဟင်းချိုတစ်စုံတစ်ရာ 'krema' ကိုအလုပ်လုပ်သည်။ အိမ်လုပ်လည်းလုပ်နိုင်တယ် မှို၏နို့ဆီမုန့် သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဤစာရွက်တွင်အသုံးပြုရန်!
အချဉ်သောမုန့်သည်အနည်းငယ်သာအရသာရှိပြီး ထပ်မံ၍ ချိုသောအရသာကိုထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်လက်တွင်ရှိသည့်အရာဖြစ်လျှင်လွင်ပြင်ဂရိဒိန်ချဉ်ကိုအစားထိုးပါ။
ရာသီ ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်နှင့်ကြက်သွန်အမှုန့်များသည်ကျွန်ုပ်၏ဤစာရွက်တွင်ပါဝင်သည်။ ထည့်ပါ cajun ရာသီ ဒါမှမဟုတ် taco ရာသီ ကထစ်တက်ကန်!
ဒီ casserole ဒါစွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်လက်တွင်ကျန်ရှိနေသောကျန်ရှိသောကျန်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။
အသား မနက်စာဝက်အူချောင်း, ကျန်ရှိသောဝက်ပေါင်ခြောက် , ဘေကွန်, အမဲသားတောက်တောက်စင်း ဒါမှမဟုတ်ကြက်သား
VEGGIES ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ဘရိုကိုလီ သို့မဟုတ်ပန်းဂေါ်ဖီ၊ အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်၊ သခွားဖရုံသီး , ဒါမှမဟုတ် diced ခရမ်းချဉ်သီး။
အဘယ်သူမျှမမုန့်ဖုတ်အသီးပိုင်ဂရေဟမ် cracker အပေါ်ယံလွှာ
ဒီ casserole ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်မုန့်ဖုတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ရုံမီးဖို၌ pop နှင့် bubbly & ရွှေအညိုရောင်သည်အထိဖုတ်!
casserole ဟင်းပွဲတွင်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ကိုရောမွှေပါ။
cornflake crumbs များကိုထောပတ်နှင့်ပေါင်းပြီး casserole ကိုဖြန်းပါ
ထိပ် bubbly နှင့်ရွှေအညိုရောင်သည်အထိမုန့်ဖုတ်!
jalapenos, အစိမ်းရောင်ချီလီ, ဆာလ်, ketchup သို့မဟုတ်ချဉ်သောမုန့်နှင့်အတူထိပ်တန်း!
ရှေ့ဆက်ပါ ညွှန်ကြားအဖြစ်ပြင်ဆင်ပါသီးခြားကွန်တိန်နာထဲမှာထိပ်ဆုံးမှထွက်ခွာ။ မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီ ၄၈ နာရီအထိအအေးခံပါ။ အပေါ် topping အပေါ်ဖြန်းနှင့်ညွှန်ကြားထားအဖြစ်မုန့်ဖုတ်။
အိမ်လုပ် Mac နှင့်ဒိန်ခဲ Casserole - ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်!
Hashbrown နံနက်စာ Casserole - ရှေ့ဆက်လုပ်ပါ
ဒိန်ခဲ Broccoli Casserole - အပြည့်အဝစားရန်ကြက်သို့မဟုတ်ဝက်ပေါင်ခြောက်ထည့်ပါ
နှစ်ခါဖုတ်ထားသောအာလူးသခွားသီး - ဒိန်ခဲ & creamy
နေ့ချင်းညချင်းဝက်အူချောင်းနံနက်စာ - အကြီးအ make- ရှေ့မုန့်ညက်
အသုဘအာလူး - လူကြိုက်များတဲ့လူအုပ်ကြီး
ဝက်အူချောင်း Cheddar နံနက်စာအလွှာ - ဝက်အူချောင်း, ဒိန်ခဲနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူတင်ဆောင်
သင်ဒီ Cheesy Potato Casserole ကိုကြိုက်လား? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်ထွက်ရန်သေချာစေပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ငါးဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စာရေးသူHolly Nilsson ဤ Cheesy Potato Casserole သည်လူအုပ်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာ၌အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃၂ အောင်စ ဖျက်စီးထားတဲ့အာလူး အေးခဲလျှင်ရေခဲ
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်သွန်အမှုန့်
▢⅔ ခွက် ဒိန်ချဥ်
▢10 ½ အောင်စ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ cheddar ဒိန်ခဲဟင်းချို သို့မဟုတ်မှိုဟင်းချို၏မုန့်
▢၁ ခွက် ချွန်ထက်သော cheddar ဒိန်ခဲ ဖျက်စီး
▢¼ ခွက် ထောပတ် အရည်ပျော်
▢¼ ခွက် နို့
▢နှစ် ဇွန်း အရည်ကျိုထောပတ်
▢၁ ခွက် ပြောင်းဖူး
350 ° F မှမီးဖို Preheat ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို 9x13 ဒယ်အိုးထဲတွင်ပေါင်းပြီးကောင်းစွာရောနှောပါ။
ညင်ညင်သာသာ cornflake အစအနကိုချိုးဖျက်နှင့်အရည်ကျိုထောပတ်နှင့်အတူဆမ်း။
casserole ကိုဖြန်းပြီးမုန့်ဖုတ်ကို ၃၅-၄၀ မိနစ် (သို့) bubbly ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီးအစေးသည်ရွှေဖြစ်သည်။
မည်သည့်အေးခဲနေသော hashbrowns မဆိုဤစာရွက်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သင့်တွင်သိပ်သည်းသော cheddar ဒိန်ခဲဟင်းချိုမရှိပါကသင်လက်ရှိသင်၌ရှိသည့် 'ခရင်မ်' မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်သည်။ ရှေ့ဆက်ပါ ညွှန်ကြားအဖြစ်ပြင်ဆင်ပါသီးခြားကွန်တိန်နာထဲမှာထိပ်ဆုံးမှထွက်ခွာ။ မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီ ၄၈ နာရီအထိအအေးခံပါ။ အပေါ် topping အပေါ်ဖြန်းနှင့်ညွှန်ကြားထားအဖြစ်မုန့်ဖုတ်။
(ပေးထားသောအာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းနှင့်အသုံးပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ )
သော့ချက်စာလုံးအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲ casserole, အကောင်းဆုံးအာလူး casserole, ဒိန်ခဲအာလူး casserole, အာလူး casserole အောင်ဘယ်လို, အာလူး casserole သင်တန်းနံနက်စာ, Casserole, ဘေးထွက်ဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။